Pcb Kugadzira Hunhu - Pandawill Technology Co, Ltd.
Hunhu ndiyo yedu yekutanga hanya. Kupa yemhando yepamusoro chigadzirwa uye inogutsa zvakakwana zvikumbiro zvevatengi zvakadzika midzi mundangariro dzevose vari kuPandawill. Izvi zvinotanga nekukurumidza kana data rako rasvika uye rinopera kusvika mushure mekutengesa sevhisi. Kudzora kwedu kwemhando yepamusoro kunosanganisira zvikamu zvitatu:
Kuuya Hunhu Kudzora
Maitiro aya ndeyekudzora vanotengesa, kuongorora zvinhu zvinouya, uye kubata matambudziko ehunhu usati wagadzirwa.
Vatengesi vedu vakuru vanosanganisira:
Ingi: Nanya, Taiyo.
Mu-Maitiro Ekugadzirisa Kudzora uye Bvunzo
Kutanga neyekugadzira mirayiridzo (MI) gadziriro, kuburikidza nemaitiro macheki, kusvika pakuongorora kwekupedzisira, kutonga kwehunhu kweakapedza kudhindwa wedunhu bhodhi inyaya inodzokororwa kuburikidza neyakagadzirwa rese system.
Nepo kuvimbika uye kunyatsoita kwemakemikari uye ekugadzirisa matanho matanho kunovimbiswa nezvakanyorwa kuongororwa mukati meichi chiitiko pamwe nematanho ekuchengetedza, bhodhi redunhu rega rega rinotarisana nematanho epakati nepakati uye ekupedzisira. Izvi zvinovimbisa kuti manyuko anogona kuitika ezvikanganiso anogona kukurumidza kuonekwa nekugadziriswa zvachose. Iwo mabhodhi edunhu anozotariswa achipesana nezvinodiwa zvepamusoro zvinozivikanwa pasi rese IPC-A-6012 Kirasi 2.
Kuongorora & kuyedza kunosanganisira:
> Cheki ye data revatengi (DRC - Dhizaini Ronga Ongorora)
> Zvemagetsi bvunzo: madiki mavhoriyamu akaongororwa neiyo inobhururuka probe uye yeakakura akateedzana achishandisa Fixture E-Bvunzo.
> Automated Optical Kuongorora: inoongorora yakapera conductor trace mufananidzo wekutsauka kubva kuGerber uye inowana zvikanganiso izvo iyo E-Bvunzo isingakwanise kuwana.
> X-Ray: tsvaga uye gadzirisa dura rekumhanyisa uye maburi ekuboora mukutsikirira.
> Kucheka zvikamu zvekuongorora
> Thermal kuvhunduka bvunzo
> Microscopic kuferefeta
> Ekupedzisira magetsi bvunzo
Kubuda Kwehutano Simbiso
Aya ndiwo maitiro ekupedzisira zvigadzirwa zvisati zvaendeswa kune vatengi. Izvo zvese zvakakosha kuve nechokwadi chekuti kutumira kwedu hakuna hurema.
Maitiro acho anosanganisira:
> Kuongorora kwekupedzisira kwekuongorora kwemabhodhi edunhu
> Kuvhara chiputira uye chisimbiso mubhokisi rekutakura.